छिमेक लघुवित्तको खुद नाफामा यसरी आयो गिरावट
Up Next :Bhajan
फेसबुकबाट ह्वाट्सएपमा किन सर्दैछन् प्रयोगकर्ता ?
नयाँ आइफोनमा चारवटा क्यामरा
प्रदेश २ मा करिब २८ अर्बको बजेट आउँदै
चिनी उद्योगीले किसानलाई झुक्याए
नयाँ सरकार बनेपछि चारपटक मूल्य वृद्धि
निपाह भाइरस संक्रमण फैलिए के गर्ने ?
लगभग 'रित्तो संसद'मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
रेसुङ्गा नगरपालिकाले दियो किसानलाई कृषिजन्य सामग्री
चालु आर्थिक बर्षको तेश्रो त्रैमासमा छिमेक लघुवित्त ले ३५ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ । गत बर्षको तेश्रो त्रैमासमा लघुवित्तले ४४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेकोमा अहिले खुद नाफा २६ प्रतिशतले घटेको हो ।
लघुवित्तको कर्मचारी खर्चमा आएको तिब्र बढोत्तरीका कारण खुद नाफामा यस्तो गिरावट देखिएको हो । लघुवित्तको निक्षेप तथा कर्जा परिचालनको आकार बढ्दा व्याज खर्च समेत बढेपछि खुद व्याज आम्दानी गत आर्थिक वर्षकोभन्दा खासै बढ्न सकेको छैन ।
त्यसमा कर्मचारी खर्च, अन्य सञ्चालन खर्चमा आएको बढोत्तरीले नाफा प्रभावित बनेको हो । साथै सम्भावित जोखिम वापतको व्यवस्थामा लघुवित्तले रकम बढाए पछि पनि नाफा प्रभावित बनेको हो ।
यस त्रैमाससम्मा दश अर्ब ९४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ निक्षेप संकलन लघुवित्तले १६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको देखिन्छ । लघुवित्तले एक अर्ब ८४ करोड २९ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको कम्पनीले ९३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । लघुवित्तले ९० करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद ब्याज आम्दानी गरेको देखिन्छ ।
लघुवित्तको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ छ । उसको जगेडा कोषमा ८७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । खराब कर्जा ०.१० प्रतिशत रहेको लघुवित्तको प्रति सेयर आम्दानी ४७ रुपैंया ७६ पैसा छ ।
यसैबिच लघुवित्तको बैशाख ६ गते सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले लघुवित्तको स्वतन्त्र सञ्चालकको रुपमा रिता पन्तलाई नियुक्ती गरेको छ ।
Hinid remix songs
Time: 09:15 am - 10:00 am
Time: 9:15 pm - 11:00 pm
Time: 8:45 pm - 9:15 pm
Time: 8:00 pm - 8:45 pm
Hai re jawana Bal vivaha final 070-08-29
Radio Sonamai 103.7 MHz
Address:Ramgopalpur-6 Mahottari Nepal
© 2017 Radio Sonamai 103.7 MHz. All Rights Reserved.